मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-01 > किन प्रार्थना गर्नु
कसैले एकपटक सोधे: "जब उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ म किन परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?" येशूले माथिको भनाइलाई हाम्रो पिताको परिचयको रूपमा गर्नुभयो। भगवान सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँको आत्मा जताततै छ। यदि हामी भगवानका चीजहरू सोध्छौं भने, यसको मतलब यो होइन कि उसले राम्रोसँग सुन्नु पर्छ। प्रार्थना भनेको परमेश्वरको ध्यान पाउनको लागि होइन। हामी पहिले देखि नै उनको ध्यान छ। हाम्रो बुबालाई हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा छ। ख्रीष्ट भन्छन् कि उहाँ हाम्रो बिचार, आवश्यकता र चाहना जान्नुहुन्छ।
त्यसोभए किन प्रार्थना गर्ने? बुबाको हैसियतमा, म चाहन्छु कि मेरा बच्चाहरूले मलाई पहिलो पटक केही पत्ता लगाए पछि पनि मलाई बताऊँ, जबकि म पहिले नै सबै विवरणहरू जान्दछु। म चाहन्छु मेरा बच्चाहरूले मलाई केहि चीजको बारेमा खुशी छ भने पनि म तिनीहरूको उत्साह देख्न सक्दछु। मँ तपाईको जीवनको सपनामा बाँड्न चाहान्छु, यदि म अनुमान लगाउन सक्छु त्यो के हुनेछ। मानव बुबाको रूपमा म परमेश्वर पिताको वास्तविकताको छाया मात्र हुँ। हाम्रो विचार र आशामा भगवान अरू कत्ति बाँड्न चाहानुहुन्छ!
के तपाईंले एक जना मसीही साथीलाई उसले किन प्रार्थना गरेको सोधेको छ? मानौं तपाईंको ईश्वरले सत्य जान्नुहुन्छ र सम्भवतः सबै विवरणहरू? इसाईले जवाफ दिए: हो, ऊ उसलाई चिन्छ। तर उहाँ सत्यको मेरो संस्करण र मेरो विवरणको दृश्यसँग परिचित हुनुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो विचार र विचारहरू चाहानुहुन्छ। ऊ हाम्रो जीवनको अंश बन्न चाहन्छ र प्रार्थना त्यस चिन्ताको एक अंग हो।